သည်အခြားအမျိုးအစားကဒ် NFC Clear Plastic Card, PVC Clear Card, RFID PVC Transparent Card, RFID Transparent Plastic Card, Transparent PVC Card
ပရိုတိုကောနျ Standard: ISO ကို 14443, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6C / 6B
RFID Chip: Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, Mifare Ultralight 10, Mifare Ultralight ကို C, ငါကုတ် SLI ကို / SLI ကို-S က / SLI ကို-L / SLIX, Mifare Desfire 2K / 4k / 8K, Mifare PLUS 2K / 4K, Ti2048, EM4200, EM4305, EM4450, EM4102, TK4100, T5577, CET5500, Hitagl, Hitag2, Hitags, FMl208(စီပီယူ), ဂြိုလ်သား h3, Impinj M5, etc.
အတိုင်းအတာ: ISO7816 CR80 85,60 × 53,98 × 0.80mm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား, ပုံသဏ္ဌာန်, အထူ
Cardbody ပစ္စည်း: ပွင့်လင်း PVC, 0.13မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုး
Transparent Plastic Card use is made of transparent material, ဒေသခံပွင့်လင်းနောက်ကျောမျက်နှာပြင်ကဒ်ပေါ်မှာ, ပုံစံကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်, လိုဂိုပွင့်လင်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့, အပြည့်အဝပွင့်လင်းစေနိုင်သည်စရှိနိုင်ပါသည်, အလွန်ဇိမ်ခံကြည့်, transparent card can also made convex code (သေးငယ်တဲ့ခုံးကုဒ်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောခုံးကုဒ်) ကိုရွှေသို့မဟုတ်ငွေအပူနှင့်လက်မှတ်ချွတ် add, according to need can also encapsulated RFID chip card. Can also printed bar code, နှင့်သံလိုက် strips တွေ,စသည်တို့ကို.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်, VIP ကဒ်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေလျှောက်ထား, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဟိုတယ်များ, ဘား, စားသောက်ဆိုင်, ကဖေး, ရုပ်ရှင်ရုံ, အလှပြင်ဆိုင်, club, အသားတင်ကဖေး, ဂိမ်းကအခန်း, ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားဒေသများ.
prev: မူရင်း NXP ဂန္ထဝင် 7byte UID Card ကို, NXP Mifare 1k S50 7byte UID Card ကို
နောက်တစ်ခု: RFID ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံတူကတ်, ပုံတူအချိန်တက်ရောက်ကတ်, ဓာတ်ပုံန်ထမ်းကဒ်
RFID Card ကို (142)
Carfts Card ကို (11)